China Carbonated Isiphuzo Futhi Soda Isiphuzo Prodution Machine ifektri abakhiqizi | GXUMA
Isiphuzo Esenziwe Carbonated Futhi Soda Phuza Prodution Machine
Umshini wesiphuzo se-Carbonated kanye nesiphuzo se-soda sisho isiphuzo esigcwele i-carbon dioxide ngaphansi kwezimo ezithile.
Iziphuzo ezinekhabhoni, izithako eziyinhloko zifaka phakathi: amanzi anekhabhoni, i-citric acid nezinye izinto ezine-asidi, ushukela, izinongo, ezinye ziqukethe i-caffeine, imibala yokufakelwa, njll. Ngaphezu kwama-carbohydrate anganezela amandla emzimbeni womuntu, "iziphuzo ezine-carbonated" eziqukethe azikho izakhamzimba. Okuvamile yile: coke, Sprite nesoda.
Imishini yokuphuza iCarbon noma imishini yeCoke. Ungumshini omkhulu nemishini yokwenza isiphuzo se-carbonated. Umshini wesiphuzo esenziwe nge-Carbonated ufaka phakathi i-Bib syrup pump kanye ne-joint, iqembu le-pressure gauge, ipayipi lesiraphu nezinto zokufaka, isihlungi samanzi, isilinda se-carbon dioxide, njll. Iziphuzo ezinamabhondi ngokuvamile zithanda ukuhlangana neqhwa ngenkathi zisetshenziswa. Zenziwa ngokugcwalisa isikhutha kwiziphuzo eziwuketshezi. Izingxenye eziyinhloko ushukela, i-pigment, izinongo, njll.
Inqubo yokukhiqiza isiphuzo se-carbonated ingahlukaniswa ibe yindlela eyodwa yokugcwalisa nezindlela ezimbili zokugcwalisa.
Isiphuzo se-Carbonated ne-soda isiphuzo somshini wokuprodution ngesikhathi esisodwa sokugcwalisa indlela
Kuyaziwa nangokuthi indlela yokugcwalisa pre conditioning, indlela yokugcwalisa umkhiqizo ophelile noma indlela yokuxuba kwangaphambili. Isiraphu yokunambitha namanzi kufakwa kumxube wesiphuzo se-carbonated ngokuya ngesilinganiso esithile kusengaphambili, bese kupholile ngemuva kokuxubana kobuningi, bese kuthi leyo ngxube ifakwe i-carbonated bese ifakwa esitsheni.
Amanzi okuphuza → ukwelashwa kwamanzi → ukupholisa → ukuxuba amanzi ngegesi ← isikhutha
Isiraphu → ukuxuba → ukuhlanganisa → ukugcwalisa → ukufaka uphawu → ukuhlola → umkhiqizo
Isitsha → ukuhlanza → ukuhlolwa
Imishini yokukhiqiza isiphuzo sebhodlela le-PET isebenzisa ubuchwepheshe be-bottle neck drive ukuze ibone ukuwashwa kwamabhodlela okuzenzakalelayo, ukugcwalisa, ukufaka ezinye izinqubo, ngezinga eliphakeme lokuzenzekelayo; ifakwe i-CO2 elawula ukulawula ingcindezi nokulawula ezingeni liketshezi; ifakwe amadivayisi wokuvikela ama-alamu amaningi afana ne-bottle jam, ibhodlela elahlekile, i-cap elahlekile nokugcwala ngokweqile ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo; kunezinzuzo zokuthembeka okuphezulu, ukusebenza kahle okuphezulu nokusebenza okulula. Izingxenye ezixhumana nezinto zomshini wokugcwalisa isiphuzo se-carbonated zenziwe ngensimbi engagqwali, ehlanzekile futhi okulula ukuyihlanza.
Langaphambilini Isisetshenziswa Isisetshenziswa Futhi Production Line
Olandelayo: Umshini Wokususa Amanzi Omsulwa
Izinsiza zeJayberry Juice
I-Equipo de jugo de arándano
I-Equipo de jugo de sandía
Izinsiza Zamagilebhisi Amagilebhisi
Izinsiza Zamajusi Wekhabe
Orange Izithelo Iwayini Izinsiza kusebenza / Amagilebhisi Iwayini Machin ...
Ukuphumelela High Prickly eliphakathi kwe Juice Production P ...
I-Pasteurize Ubisi Oluketsheziwe Lobisi Lokukhiqizwa ...
Izinsiza kusebenza Zobhiya Ezintsha
Umugqa Wokukhiqiza Ubisi Wama-250L / H Oat
Umugqa Wokukhiqizwa Koyogathi / Indawo Yokucubungula Ubisi